OPride.com|Hambaa Habalee Cittee » Akkoo Manooyyee Beektuu???
Home » Featured, Oduu-Durii
Submitted by on June 22, 2011  9:50 pm6 Comments
Jalqaba namoota gabaabaa lafarraa fixaa jettee murtii labsite. Akka yaada akkoo mannoyyeetti namoonni gabaaboon qaroodha. Yeroo adda addaatti yeroo isiin ajaja adda adaa ummatni akka raawwatan barbaaddu, namoonni gaggabaaboon ni mormuun. Dubbiin isaan injifachu hin dandeenne. Kanaaf dubbiin isii akka nammoota qaroo kanaan akka jalaa hin fashaleefi. Walumaagalatti nama isii mormu waan hinbarbaanneef murtii kana fudhattee. Battaluma sanatti jaarsi gabaabaan tokko , “ mee waan isinii toluuf qabaa boolla keessatti nadhoysaa nahanbisaa jedhee.” namootta ajaja akkoo mannooyyee hojii irra oolchuutti jiran gaafatte. Isaanis tolee jedhanii jaarsa kana osoo hin ajjeesin hambisan.
Erga namoota na morman ykn yaada kiyya afoo dhabbachuu dandan’an (namoota gaggabaaboo) jettee amantu erga ajjesisiiftee raawwattee booda , ajaja jajjaboo enyuuyeroo sanatti fala itti argachuu hin dandeenne dabarsuu eegalte.
Ajajinni isa duraa: lafaa fi samii jiddutti mana naaf ijaaraa jettee ajajje. Namoonnis dubbin kun waan isaan rakkiseef fala dhabanii jennaan jarsa gabaabaa na’awwaalaa jedhe san bira dhaqanii furmaata gaafatan. Jaarsichi dubbiin geette itti yaadde fala gabaabaa namoota isa gaafataniitti hime. “Akka jettaniin, nuti mana siif ijaarraa garuu dhoqqee abbatu buufataa ati buufadhu” jedhaanii jedhe. Namootni akkoo mannooyyeetti deebi’anii deebi’anii akkumma jaarsi gabaabaan jedhe jedhanii itti himanii jennaan namni gabaabaan hafee jira jette.
Ajajinni isa lammaffaa: mana ani keessa galu kana usoo asii hin sochoosin balbala isaa kana gara gaaraatti laalchisaa naa baasaa jette, isaanis akkuma duraa san jaarsa gabaabaa bira deemanii furmaata gaafatan. Jaarsi akkana jedheen deebiseef “yoo isiin rafte balbala mana isii kan duraa cufaattii kan biraa gara gaaraa laalchisaa banaafii jedhe.
Kana booda hifattee jennaan akkana jette “wonta fardaa gadii kan harree olii naa fidaa nayaabbisaa” jette ajaja dabarsite. Toleekaa jedhanii harree-diidoo fidaniifii yaabisanii irraatti hidhanii gad dhiisan,kana booda harreen fuutee halayyaa irraa gattee akkoo mannooyyee achitti hambifte jedhama.
– Abdii Borii Irraa
Read the Full Story (Imagining the Reign of Akkoo Manooyee)
6 Comments » Adam says:	July 1, 2011 at 2:49 pm	Abdii baay`ee si galateenfadha akkanumatti itti Rabbiin akkanumatti itti sii haa fufsiisu jabaadhu si waliin dhaabbadha
obsagursum says:	December 11, 2011 at 4:48 pm	akkam jirtan ummanni oromoo warreen asiratti ummata oromoo bashanansisaa jirtan nagaya qabdanii an baayyen gammadee jira hunda asirratti waan fiitaanii jirtan hundaa galata guddaa qabdaa ummata oromoo irraa.
obsagursum says:	December 11, 2011 at 5:33 pm	jabaadhuu abdi boru ati abdii ummata oromooti.
wadaa says:	May 13, 2012 at 6:03 pm	Im so proud of you!!
Oumar says:	May 21, 2012 at 1:46 am	I am from Walloo, and we don’t call tale ‘Oduu durii’ we, instead, call it ‘Durii-durii’. Our history and way of life are in oral forms ( tale, riddle, proverbs, folk arts..etc), and we need to collect them before they die.
ABDISALAM MOHAMED says:	December 11, 2014 at 6:33 pm	Is it a true story?